च्याङ्लीमा शिवरात्री मेला २०७५ को तयारी तीब्र, १८ र १९ गते भलिबल प्रतियोगिता हुने – गोर्खा संसार
च्याङ्लीमा शिवरात्री मेला २०७५ को तयारी तीब्र, १८ र १९ गते भलिबल प्रतियोगिता हुने
गोर्खा संसार२०७५, १६ फाल्गुन बिहीबार १५:४९
पालुङटार नगरपालिका वडा नं. ७ च्याङलीको पुरानो ऐतिहासिक मन्दिर मंगलेश्वर महादेव मन्दिरमा हुने शिवरात्री मेलाको तयारी तीव्र पारिएको छ । मन्दिर वरपर सरसफाइ तथा ग्राउण्ड मरमत कार्य गरिसकिएको छ ।
कार्यक्रमलाई गतवर्षहरुमा भन्दा व्यवस्थित गर्ने तरिकाले कार्यक्रमको तयारी गरिएको वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष वसन्त कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । विस्तारै हराउँदै गएको हाम्रो संस्कृति संरक्षणमा सवैले एकाकार भएर लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्दिर पुन निर्माणको कार्य भइरहेको हुँदा दर्शनार्थीहरुलाई केही कठिनाइ हुनसक्ने हुँदा सो को व्यवस्थापनका लागी समेत ध्यान पुर्याएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण भण्डारीले बताउनुभयो ।
आगामी फागुन २० गते शिवरात्रीका दिन बिशेष शिवरात्री मेला को अवसरमा विविध कार्यक्रम गरिने जनाइएको छ । शिवरात्रीको पूर्व सन्ध्या पारी फागुन १८ र १९ गते सञ्चालन गरिने भलिबल प्रतियोगितामा नगरपालिका भित्रका मात्र टिमहरुको सहभागी गराइने छ । प्रतियोगितामा सहभागी भई प्रथम हुने टिमलाई नगद रु. १०,००० र प्रमाण पत्र एवं दाश्रो हुनेलाई नगद रु.५,००० र प्रमाण पत्र प्रदान गरिने संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो । खेलमा सहभागी समूहसंग इन्ट्री शुल्क बापत रु.१००० लिने आयोजकले जनाएको छ । २० गते हुने नृत्य प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई नगद रु.३००० र प्रमाण पत्र द्धितीय हुनेलाई नगद रु.२००० र प्रमाण पत्र साथै तृतीय हुनेलाई नगद रु.१००० र प्रमाण पत्र प्रदान गरिनेछ ।
कार्यक्रमको दौरानमा उठेको सहयोग बाट बचेको रकम मन्दिर व्यवस्थित गरी यसको प्रचार प्रसार एवं प्रवद्र्धनमा खर्च गरिनुका साथै अन्य सामाजिक क्षेत्रका विकासका कामका खर्च गरिने जनाइएको छ ।